Benjamin Bratt – Stars – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Demolition Man (1993) Unicode စတားလုံးရဲက 1993 မှာထှကျခဲ့တဲ့ သိပ်ပံဆနျးကွယျဇာတျကားကောငျးပါ။ ရဲတဈယောကျဖွဈတဲ့ စတားလုံးတဈယောကျ လူဆိုးကိုဖမျးဖို့ကွိုးစားရငျး အမိနျ့မနာခံပဲ အပကျြအစီးတှေ ဓားစားခံတှဆေုံးရူံးလိုကျရတဲ့ အခါ တရားခံနဲ့အတူ ထောငျကဖြို့ဖွဈလာပါတယျ။ ထောငျကတြဲ့နညျးကတော့ အိပျစကျစပွေီး နှဈပေါငျးမြားစှာကွာမှပွနျနိုးတဲ့ နညျးပညာနဲ့ပါ။ 2046 မှာ တရားခံကပွနျနိုးလာပွီး ထောငျဖောကျပွေး ဒုစရိုကျမူ့တှပွေနျလုပျတဲ့ အခါ ဘာတှဆေကျဖွဈလာမလဲ ? စတားလုံးအနနေဲ့ ပွနျလညျတားစီးနိုငျမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ Zawgyi စတားလုံးရဲက 1993 မှာထွက်ခဲ့တဲ့ သိပ္ပံဆန်းကြယ်ဇာတ်ကားကောင်းပါ။ ရဲတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ စတားလုံးတစ်ယောက် လူဆိုးကိုဖမ်းဖို့ကြိုးစားရင်း အမိန့်မနာခံပဲ အပျက်အစီးတွေ ဓားစားခံတွေဆုံးရူံးလိုက်ရတဲ့ အခါ တရားခံနဲ့အတူ ထောင်ကျဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ ထောင်ကျတဲ့နည်းကတော့ အိပ်စက်စေပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှပြန်နိုးတဲ့ နည်းပညာနဲ့ပါ။ 2046 မှာ တရားခံကပြန်နိုးလာပြီး ထောင်ဖောက်ပြေး ဒုစရိုက်မူ့တွေပြန်လုပ်တဲ့ အခါ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ ? စတားလုံးအနေနဲ့ ပြန်လည်တားစီးနိုင်မလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ
IMDB: 6.7/10 148,432 votes
Shot Caller (2017) ထောင်ဆိုတာ လူဆိုးလူမိုက် တွေအတွက်နေတဲ့အိမ်လား ဒါမှမဟုတ် လူဆိုးလူမိုက်ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးတဲ့စခန်းတစ်ခုလေလား။ မန်းနီး ဆိုတဲ့သူက ရိုးရိုးအေးအေးနဲ့ ပုံမှန်လူတစ်ယောက်။မတော်တဆမှုကြောင့် သူငယ်ချင်းသေဆုံးရလို့ ထောင်ထဲဝင်ရတဲ့အခါမှတော့…. သူဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ ဘယ်လောက်တောင်ပြောင်းလဲသွားလဲ သူဘ၀တစ်ခုလုံးကို စွန့်လွှတ်ပြီး တစ်သက်တစ်ကျွန်းဆိုတဲ့ အပြစ်ဒဏ်ကို ဘာလို့ရွေးချယ်ခဲ့လဲဆိုတာတော့…. Credit Review
IMDB: 7.3/10 58,589 votes